Madaxweyne Farmaajo Oo Hakiyay Kulankii maanta Ee Baarlamaanka Soomaaliya Iyo Arrimo Xasaasi Ah Oo Lagaga Doodayay | Haqabtire News
Madaxweyne Farmaajo Oo Hakiyay Kulankii maanta Ee Baarlamaanka Soomaaliya Iyo Arrimo Xasaasi Ah Oo Lagaga Doodayay
March 31, 2018 - Written by Warbaahinta Haqabtire
Muqdisho:-(HTN) Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hakiyay kulankii maanta oo sabti loo balansanaa ee Baarlamaanka, xilli ay cirka isku shareertay xiisada u dhaxeysa Baarlamaanka iyo Xukuumadda ee ka dhalatay mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari.
War qoraal ah oo ka soo baxay Guddoomiye Jawaari oo uu xalay saxaafada u akhriyay Guddoomiye kuxigeenka labaad Mahad Cawad ayaa Madaxweynaha ku eedeeyay inuu gabay xilkii ka saarnaa ilaalinta dastuurka iyo shuruucda dalka ee kala madax banaanida Hey’addaha sharci dejinta, Fulinta iyo Garsoorka, waxaana si toos ah ay u sheegeen in Madaxweynuhu ku lug yeeshay khilaafka taagan oo dhinaca Xukuumadda la saftay.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana la xiray waddooyin badan, iyadoo ciidamo Boolis ah ay la wareegeen xarunta Baarlamaanka.
Xeebaha Somaliland oo inta badan la timaamo in ay yihiin xeebaha ugu dihin qaaraddan Afrika isla markaasina kalluunka iyo kheyraadka baddeeda ku jiraa yihiin kuwo aan si waafiya looga faa’iidaysan ayaa muddooyinkii u danbeeyey waxa ku soo badanaya shirkaddo laga leeyahay dalalka shisheeyo oo sifo sharci-darro ah uga faa’iidaysata kheyraadka ku jira baddaha Somaliland.
Wasaaraddii hore ee Kalluumaysiga iyo Kheyraadka badda wakhtigii xukuumadda Siilaanyo waxay soo saartay go’aamo shirkaddaha ajaanibka ah lagaga mamnuucaayo in ay ka kalluumaystaan baddaha Somaliland inkasta oo go’aamadaasi aanay si toos ah u hirgalay bal se waxa jirtay in tirada doonyaha iyo maraakiibta kalluunka ka urursata baddaha Somaliland ay hoos u dhacee marka la barbar dhiggo wakhtigan hadda oo la sheegay in maraakiib iyo doonyo shisheeye ka kalluumaysanayaan xeebaha Somaliland.
Muddooyinkan u danbeeyey waxa soo kordhaayey doonyaha iyo maraakiib ay leeyihiin shirkaddo ajaanib ah oo kalluunka iyo macdantaba ka urursada baddaha Somaliland si dhuumaaleysi ah sida ay caddeeyeen qaar kamid ah dadka kalluumaysatada ah ee ku dhaqan xeebaha Somaliland.
“Doonyo ajaanib ah ayaa ka daf ah badda (Somaliland) ilaa imika ayay dul taagan yihiin oo waan ku dul geyn karaa. Cidna kamay bixin iyo waxbaa laga saaray waxba kama jiraan. Dadkii dalka u dhashay ayaanu nahay oo been sheegi mayno…” ayuu yidhi mid kamid ah dadka kalluumaysatada ah ee ku dhaqan xeebta Seylac oo la hadlay muuqbaahiyaha Eryal Tv.
Dadka nolol maalmeedkooda ka raadiyada xeebaha Somaliland gaar ahaan dadka kalluunka soo jilaabta waxay walaac xooggan ka muujiyeen maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ku haya kalluunka ku jira baddaha Somaliland oo ay sheegeen in aanay wax tudhaale ah u galeyn.
Dawladda Somaliland ayaan iyadu wax xil ah iska saarin ilaalinta xeebaheeda marka loo eego ajaanibta badan ee sida fudud uga kalluumaysta badda iyada oo aanay jirin wax cabsi ah oo ay ka qabaan ciidanka ilaalada xeebaha Somaliland oo hadda ay tiradoodu iska yar tahay.
Haddaba xukuumadda madaxwayne Muuse Biixi ayaa arrimaha ka taagan xeebaha Somaliland dhegaha faraha ka gashatay gaar ahaan wasaaraddii loo xil saaray kheyraadka badda iyo xeebaha, lamana saadaalin karo xaalku siduu ku danbeyn doono haddii aan talaabo deg deg ah laga qaadin kalluumaysatada ajaanibka ah ee ku sugan xeebaha Somaliland.